4 wheel mbanye forklift truck Factory - China 4 wheel mbanye forklift truck Manufacturers, Suppliers
3 TON 4 × 4 Anọ na-atụgharị Forklift
WIK 4 wheel forklift truck nwere oge anọ nwere ụkwụ anọ, nke na-eme ka ikike nke forklift dịkwuo ukwuu. Ọ bụ ụgbọ ala injinia nke nwere ike ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-ebudata, na-ebugharị ma na-arụ ọrụ nke ọma na ala na-enweghị atụ dịka apịtị, ubi, na ugwu. Ọ nwere ezigbo ọrụ ọfụma, na-agafe arụmọrụ na njikwa. Ọ nwere ike dochie ihe mgbakwunye dị iche iche iji melite arụmọrụ ọrụ. Akụrụngwa maka itinye na ibutu ihe na ma ...
4 × 4 Forklift 1.8-mita okpuru ulo
3.5TON 4WD kgbọala Forklift
WIK40-80 4 wheel gbagọrọ agbagọ forklift truck